Frontier mandefa sidina Belst tsy an-kijanona avy any Denver sy Orlando
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Belize » Frontier mandefa sidina Belst tsy an-kijanona avy any Denver sy Orlando
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Belize • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Belize Tourism Board dia mihevitra ny fanombohan'ny serivisy Frontier Airlines ho an'i Belize ho fanitarana lehibe eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena.
Hiainga ny Denver amin'ny 8:36 maraina ny sidina voalohany ary tonga any Belize amin'ny 13:44 hariva.
Ny sidina faharoa dia hiainga ao Orlando amin'ny 13:42 pm ary tonga ao Belize amin'ny 15:10 pm. Hiainga Belize mankany Denver amin'ny 16:15 hariva ary tonga amin'ny 9:40 alina.
Ny serivisy, izay atolotra voalohany amin'ny asabotsy fotsiny, dia ho manodidina ny taona miaraka amin'ny mety hisian'ny fitomboana fanampiny amin'ny ho avy.
The Belize Tourism Board (BTB) miarahaba ny fanambarana nataon'ny Frontier Airlines momba ny fanombohan'ny serivisy tsy an-kijanona any Belize avy any Denver, Colorado ary Orlando, Florida manomboka ny 11 Desambra 2021. Ny serivisy, izay atolotra voalohany amin'ny asabotsy fotsiny, dia mandritra ny taona. miaraka amin'ny mety hisian'ny fitomboana fanampiny amin'ny ho avy.
Hiainga ny Denver amin'ny 8:36 maraina ny sidina voalohany ary tonga any Belize amin'ny 13:44 hariva. Hiainga any Belize mankany Orlando io sidina io amin'ny 14:49 hariva ary tonga amin'ny 18:14 hariva. Ny sidina faharoa dia hiainga ao Orlando amin'ny 13:42 pm ary tonga ao Belize amin'ny 15:10 pm. Hiainga Belize mankany Denver amin'ny 16:15 hariva ary tonga amin'ny 9:40 alina.
"Faly izahay manambara ny fanompoana any Belize City avy amin'ny tsena roa lehibe any Etazonia: Denver sy Orlando," hoy i Daniel Shurz, filoha lefitra zon'ny varotra, Frontier Airlines. “Manantena ny fandraisana ireo mpitsidika any Belize izahay amin'ny sambo fiaramanidina Green hijerena ny tontolo voajanahary tsy manam-paharoa, ny bibidia ary ny hetsika feno masoandro ary ny mponina eo an-toerana izay mitady fivelomana mora vidy any Etazonia”
Ny Biraon'ny fizahantany Belize dia mihevitra ny fiantombohan'ny serivisy Frontier Airlines ho an'i Belize ho fanitarana lehibe ny fifandraisana iraisam-pirenena ao amin'ny firenena satria ahafahan'ny mpitsidika avy any Andrefana sy atsimo-atsinanan'i Etazonia safidy malalaka momba ny dia hankafizany an'i Belize ho toerana fialantsasatra voalohany.
Ny ezaka ataon'i Belize amin'ny fampitomboana ny fifandraisana amin'ny sidina iraisam-pirenena dia efa mahomby. Ny volana Mey dia nisoratra anarana mpitsidika 19,544 alina tany Belize raha ny volana Jona kosa dia 26,215 ny mpitsidika. Ireo isa ho an'ny Jolay dia mitohy mandeha tsara ihany koa, izay manamarika fa ny indostrian'ny fizahan-tany any Belize dia eo an-dalam-pandrosoana.